IZIMVO EZITHANDWAYO ZOMTSHATO - IZIPHO
Eyona Izipho Izimvo zomtshato ezidliwayo (loo nqanawa kwilizwe liphela!)
Izimvo zomtshato ezidliwayo (loo nqanawa kwilizwe liphela!)
Nokuba ufuna ukongeza ibar yakho yedessert okanye uthumele iindwendwe ekhaya ngento enencasa, sinazo zonke izinto ezilungileyo onokuzi-odola ngoku.
UAndrea Fowler nguMphathi woMxholo woMhleli kuSony Music Entertainment.
UAndrea sisicwangciso-qhinga somxholo eseNew York kunye nomvelisi woyilo.
UAndrea wasebenza njengoMhleli oNcedisayo weNqaku ukusuka ngo-2015 ukuya ku-2017.
Ukuhlaziywa kweNovemba 10, 2020
Ukuba kukho into enye thina yazi malunga nemitshato, zizinto ezithandwayo ezithandwayo ezingaze zishiyeke ngasemva. Ewe, ubabalo aludingeki, kodwa yindlela entle yokubonisa iindwendwe zakho ukuba uyayixabisa inkxaso yazo (kunye nokuzimasa!). Into esiyithandayo malunga nezinto ezithandwayo zomtshato kukuba ziyasebenza-ukwaneliseka kwangoko. Imitshato eneendwendwe ezininzi zangaphandle kwedolophu, ukunyanga okususwayo kuthetha ukuba banokuyonwabela kwangoko kwaye ngekhe babe nexhala ngokupakisha into eyongezelelweyo kwiingxowa zabo zohambo lwasekhaya (okanye okubi kakhulu, yishiye ngasemva iyonke ). Ingcebiso yepro: Cwangcisa malunga ne-10 eyongezelelweyo kwiindwendwe ezili-100, xa kukho nayiphi na elahlekileyo.
Xa ucinga malunga nokulunga kwakho, gcinani engqondweni ukuba bazakushiya umbono ongapheliyo. Khetha into emnandi ethetha ngomxholo wakho womtshato okanye ubuntu njengesibini! Ngaba wena kunye ne-hubby yakho uhlala uzingela ii-macarons ezilungileyo zaseFrance? Mhlawumbi uhlala undwendwela indawo yokuhlala i-ice cream? Phatha iindwendwe zakho ukuba uzonwabise nobabini.
Nokuba yeyiphi na into emnandi, efanelekileyo yokutya okanye ehlekisayo e-Instagrammable, sinazo zonke iintlobo zomtshato ezidliwayo onokukhetha kuzo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa zonke ezi zinto zimnandi ziya kuthunyelwa ngqo emnyango wakho!
1. Mini iMacaron Favors
Kwangoko kulo nyaka, kubhakwe nguMelissa kusungulwe iswiti entsha kumacarons aseFrance, ukwazisa ubungakanani bokulunywa kwiincasa zekrisimesi ezinje ngecookie yeswekile, itshokholethi ephindwe kabini, velvet ebomvu kunye ne-snickerdoodle. (Banayo ne-gluten-free!)
Kubhakwe nguMelissa iiMacaroons, $ 20 ukuya kuma-25, BakedbyMelissa.com
2. IiPopcorn Favors
Uyakucinezelwa nzima ukufumana undwendwe olungenakufuna ukuthatha le popcorn ekhaya. I-combo ethandekayo ye-caramel kunye noshizi-utyikityo lukaGarrett-luyathandeka kwaye lumnandi kwangaxeshanye.
I-Garrett Popcorn Umxube weGarrett owenziwe ngesandla, i-150 yeedola kwiitoti ezingama-24, GarrettPopcorn.com
3. B'day Cake Truffle uthanda
Sivumele ukuba sikwazise kwi-truffle yokugqibela: ikhekhe lomnyama we-vanilla oxutywe nobisi olungenisiweyo lwe-vanilla, eligutyungelwe itshokholethi emhlophe kwaye liqengqiwe kwiimvuthuluka zekhekhe lomnyama. Phonsa aba bafana bancinci kwiikomityi ezintle zeefoyile (ezilungelelaniswe nemibala yakho yomtshato, ewe) kwaye uzibeke embindini wendawo yokumisela indawo yeendwendwe nganye.
Ibisi yobisi I-truffles ze-B'day, i- $ 24 ye-12, MilkBarStore.com
Oku ayisiyiyo nayiphi na ipie endala. Ngobumnandi babo bokuyila (itshizi yobusi lweebhokhwe itshizi, nabani na?) Ezi zinto ziphathwayo zilungele i-foodie. Ngaba ukhathazekile ukuba iindwendwe zakho zisenokungabi njalo? Banazo ezakudala ezifana neetshokholethi eziphindwe kabini kunye nevanilla nazo. Wonke umntu uyaphumelela!
Ukubetha kunye neCream ibhokisi yebhokisi ye-whoopie, i- $ 16 ye-10, BatterandCream.com
5. Ukuthanda iCream Cream Favors
Nge-eCreamery, unokukhetha ngaphezulu kweencasa ezingama-30 kunye nezongezo ezingama-40 ukwenza isiko le-ayisikhrim combo yonke eyakho. Ukupakishwa kunokukwenziwa ubuqu kunye nelogo emnandi okanye i-monogram. Kwaye kuzo naziphi na iindwendwe ezinezithintelo kwindlela otya ngayo, kukwakhona ukungabikho kobisi, i-gluten-free kunye neejelato. Qiniseka nje ukuba uququzelela ukuhanjiswa kunye nendawo yakho-awufuni ukuba ezi zihlale ixesha elide!
eCreamery iikomityi zesiko, i-100 yeedola kuma-24, eCreamery.com
6. IMarshmallow Sandwich Cookie Favors
Ayisiyiyo kuphela le cookies yomgxobhozo eyahluke kwaphela, ikwenziwe ngezithako zorhwebo ezifanelekileyo kunye nothintelo lokugcina olungelulo. Khetha kwiincasa ezimnandi ezifana ne-raspberry hibiscus kunye ne-espresso ene-spiked. Ngaba ucinga ukuba unebhari yetshokholethi eshushu kumtshato wakho wobusika? Zithumele ezi ecaleni kwecocoa ngokudibana ngokugqibeleleyo. (Ibhonasi: Unokwenza ngokwezifiso ukupakishwa komtshato womntu!)
Ukudibana kweMalvi Marshmallow isiko marshmallow cookies, $ 7 for 4, MalviMallow.com
7. UBrownie Favors
Ngaba zimbalwa iindwendwe ezinezithintelo ekudleni? Unento emnandi ezandleni zabo nabo. Ezi ziphatha zii-vegan, i-gluten-free, i-nut-free, i-soy-free kunye ne-kosher. Ngokusisiseko, i-Pure Genius igubungele zonke iziseko zokutya kwaye isabulala umdlalo we-brownie.
Amalungiselelo eGenius acocekileyo itshokholethi enzulu brownie, $ 40 ye-16, PureGeniusProvisions.com
8. Iibhokisi eziKhethiweyo zePipi
Ukuba ucinga ngokunika isibini esithandekayo, ezi bhokisi zeeswidi zomthendeleko zijonga indawo kwaye zanele ukuba zabelane. Qinisekisa ukuba umntu ujonga itshathi yokuhlala kabini! Awufuni ukuba umhlobo wakho omnye agoduke engenanto kuba behleli esihlalweni esenzelwe iqabane.
Iswekile Enkosi kwibhokisi, $ 26, Iswekile.com
9. IiCake Pop Favors
Ukulunywa okuncinci kwekhekhe kwintonga yeyona nto ilungileyo yokubamba kunye nokuhamba. Kwaye ngeqabaka enje, baphindwe kabini njengemihla yomtshato. Yiba ne-tie tie enxibe umncedisi obekwe ngophuma ukuze uthumele iindwendwe nento enencasa ngendlela entle.
IiPops zeCake zaseNew York , ukusuka kwi- $ 39 ye-12, IvenkileNYCakePops.com
10. Ukuthanda Ikuki Intlama
Kukhuselekile ngokugqibeleleyo ukutya okanye ukubhaka-ukuba unokulinda ixesha elide-le ntlama yecookie iyafumaneka kwi-20 ezahlukeneyo, uninzi lwayo lunokwenziwa nge-vegan okanye nge-gluten. Siqinisekisa ukuba akusayi kubakho namnye oshiye ngasemva! (Mhlawumbi bothuke abo batshatayo.)
Ikuki YENZA i-NYC intlama yecookie, $ 5 nge-4 oz. isikhongozeli, CookieDONYC.com
11. Ikhekhe kwiJar Favors
Yothusa iindwendwe zakho ngedessert yokuthatha ekhaya entle njengoko imnandi. Yintoni esiyithandayo ngolu luyilo? Iikeyiki eziveziweyo kunye neqabaka ezinqabileyo zilinganisa ikhekhe ze, kodwa kwisitya esifanelekileyo sokuhamba!
Iingqayi zikaDani Izimbiza ezinkulu ezahlukileyo, iidola ezingama-30 ukuya kwezi-5, JarsbyDani.com
12. IBoxed Brownie kunye neBlondie Favors
Iiklasikhi ezimbini kwibhokisi enye: Nganye kwezi zinto zimnandi zineebhulukhwe ezimbini kunye neeblukhwe ezimbini ezipakishwe kakuhle ngaphakathi-nokuba kunjalo, siqikelela ukuba akukho mntu uya kufuna ukwabelana. (Siyayithanda umbono wokubhangqa i-ayisikrimu yasebusuku ezinje ngale.)
IMagnolia Bakery I-blondie kunye ne-brownie ibhokisi ekhethiweyo, $ 18, MagnoliaBakery.com
13. Iincasa ezithandekayo zeMacaron
Siyazithanda ii-macarons, kodwa ngakumbi sithanda ii-macarons ezityhala imvulophu! Olu nyango luncinci lunencasa eza nencasa eyahlukileyo ngokupheleleyo, njenge-chocolate-chip mint, i-lavender yetshokholethi, iziqhamo ezinomdla kunye necheri yetshokholethi emhlophe. Kwaye ungaphumla ngokulula usazi ukuba ezi sele zipakishwe ngokugqibeleleyo ngebhanti entle-uwine uwonke.
Yhu! iiMacarons, $ 5 kwibhokisi yokuthandeka eyi-2, ByWoops.com
14. IiCandy Candy Favors
Njengokungathi iindwendwe azizukudla le ntandokazi yabantwana, uLe Puf ubonelela ngeelekese ezimnandi zekotoni njengekhekhe (kunye nezinto eziphilayo).
Umfundi Ikhonkco yekotoni ikholekile, $ 4, LePufOrganicCottonCandy.com
15. Crispy Phatha Ukuthanda
Chukumisa kolu nostalgia lobuntwana kunye nokuphathwa kobungakanani bokuluma. Kodwa olu hlobo lwegourmet lulunge ngokupheleleyo kubantu abadala. Ibhokisi yabo eneepakethi ezimbini ilungile kwisibheno esinye kunye nomnye umntu oza kuthatha emva kwexesha.
Phatha iNdlu ukuphatha, i-7 yeedola kwibhokisi yokuthandeka eyi-2, UnyangoHouse.com
16. Abathanda iNdebe yeCookie
Khawufane ucinge ubuso babo bonke abo bantu RSVP'd 'hayi' xa bebona ezi cookies ziphambeneyo phantsi komtshato wakho hashtag kwi-Instagram. Ezi ndebe zecookie zikhethiweyo zidibanisa iincasa ezimbini ezimangalisayo: iqokobhe lecookie yangaphandle (itshokholethi, iswekile, isinamoni, njl.
UMdoughW iikomityi zecookie, $ 4, MdoughW.com
nyathela kwindlela yokubopha iqhina
17. Iitshokholethi eziCwecwe ngeTshokholethi
UJoseph Lin Photography
Awungekhe uhambe ngokungamnandanga kunye netyuwa, ngakumbi xa kukho iinyibilikisi zemvula ezichaphazelekayo.
IiCawa ezinamanqatha I-pretzels yobisi yobisi, ukusuka kwi- $ 6, IifayileSundays.com
utata okhethekileyo wezipho zomtshakazi
Izipho ezilungileyo zomtshato kumyeni
yintoni enxiba umfazi oneminyaka engama-60 emtshatweni
Ukufa kukwahlula izifungo zomtshato
yintoni ikeyiki ehamba ze